Saraakiil ka tirsan maamulka Dooxada Shabeelle oo ka badbaaday qarax miino. – Radio Daljir
Saraakiil ka tirsan maamulka Dooxada Shabeelle oo ka badbaaday qarax miino.
Baledwayn, Dec 28 – Qarax aan khasaaro geysan ayaa saqdii dhexe ee xalay lalabeegsaday gaadiid ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan mamulka Dooxada Shabeele,waxaana qaraxu uu ka dhacay deegaanka Kala-beyr ee gobolka Hiiraan.
Qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay goob si weyn amaankeeda loo ilaasho ayna dagan yihiin ciidanka mamulka iyo xildhibaano ka tirsan mamulkaasi.
Afhayeenka maamulka Dooxada Shabeelle Maxamed Nuur Shire oo Radio Daljir la hadlayay ayaa sheegay in dad haween iyo rag isugu jira loosoo qabtay inay ka dambeeyeen qaraxa,kuwaas oo laga soo qabtay goobta qaraxu kadhacay.
Deegaanka Kala-beyr ayaa waxaa dhawaanahan ka dhacayay qaraxyo la dhigo goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka amaanka mamulka dooxada Shabeele ee deegaanka ku sugan.
Mamulka Dooxada Shabeela ayaa waxa ay dhawaan soo qabteen dad ajnabi ah oo ay la xiriirinayaan inay Al-Shabaab xiriir la leeyihiin kuwaas oo ay mamulku qabteen xili ay safar ahaayeen.